I-XZ400 HDD inesakhiwo esidibeneyo kunye nembonakalo efanelekileyo. Ezona zinto ziphambili ekusebenzeni kwazo kubuchwephesha zifikelele kwinqanaba eliphezulu lasekhaya. Iindawo eziphambili kunye namacandelo kunye namacandelo e-corollary e-brand eyaziwayo yasekhaya kwaye inentsebenzo elungileyo kunye nomgangatho onokuthenjwa, uqinisekisa ukuthembeka kwesandi kuwo wonke umatshini.
Iimpawu zokwazisa ngeXZ400 HDD
Ukulawulwa kweenqwelo moya ze-1, ukubonelela ngokusebenza okusebenzayo kunye nommiselo oguqukayo, uphawu lodidi lokuqala lwezinto ze-hydraulic zokuqinisekisa ukuthembeka kwenkqubo yomatshini wesanti.
2.Rack kunye pinion sliding, ukuqinisekisa uzinzo ukuthuthwa kunye nokuthembeka drive ukusebenza. Ukuhamba ngokudada, i-XCMG yelungelo lokushicilela elinelungelo elilodwa lomenzi lokudada, iteknoloji yesekethe edadayo inokukhusela kakhulu umsonto wombhobho wokugrumba, ubomi benkonzo yombhobho wokugrumba we-30% ukwanda.
Isantya-ntloko amandla amabini, ukubaleka ngesantya esisezantsi xa kusombiwa kwaye urhuqa umva ukuqinisekisa ulwakhiwo olugudileyo; xa ukothula umbhobho wokugrumba ngaphandle komthwalo, intloko yamandla inokukhawulezisa ukutyibilika, ukunciphisa ixesha elincedisayo kunye nokuphucula ukusebenza kakuhle komsebenzi.
4.Semi-oluzenzekelayo iyalayisha nokothula isixhobo drill umbhobho, eqonda ulwakhiwo oluzenzekelayo kakuhle, ukunciphisa iindleko zokwakha kunye nokusebenza ngamandla.
5.Ukuxhasa iimfuno ezahlukeneyo zabathengi, umatshini unokunyuswa ngesixhobo esizenzekelayo sokubamba umbhobho, inkqubo yokumisa ngokuzenzekelayo, iklabhu, umoya opholileyo womoya, ukuqala okubandayo, udaka olubandayo, ukuhlamba udaka, udaka kunye nezinye izixhobo.
I-Rotary Motor / iPush Motor
Isilinda oyile hydraulic
Isantya sokunciphisa isantya
Ukuqala komatshini weXZ400 HDD xa uhamba noluhlu lokupakisha, kubandakanya la maxwebhu alandelayo:
Isatifikethi seMveliso / Incwadana yemveliso / iinxalenye zeMveliso Iatlasi / incwadana yolondolozo lwenjini / ukusetyenziswa kwempompo yodaka kunye nencwadana yolondolozo
Egqithileyo XZ320D tyaba zemiyalelo yokomba rig
Okulandelayo: XZ420E tyaba zemiyalelo zokomba rig
Iindleko zoMatshini weBorewell
Ngesanti kubunzulu baphantsi Borewell Machine
Umatshini wokugrumba amaqula, I-hdd rig, umatshini wokugrumba i-hdd, Horizontal Directional Ukubhola Rig,